25.02 Tia an'i Jeso
Ny teny hovakiantsika anio Alahady 25 Febroary 2018 ka hakantsika sakafom-panahy dia izay voasoratra ao amin' ny Lioka 7.36-49, ka hojerentsika amin' izany ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy na ny Fanahy Masina ? inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ? ary farany dia hoe inona ny fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?
36 Ary ny Fariseo anankiray nanasa an’ i Jeso hiara-mihinana aminy; ary dia niditra tao an-tranon’ ilay Fariseo Izy ka nipetraka nihinana.
37 Ary, indro, nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jeso nipetraka nihinana tao an-tranon’ ilay Fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy;
39 Ary nony nahita izany ilay Fariseo nanasa Azy, dia nanao anakam-pò hoe : Raha mpaminany Itý, dia ho nahalala io vehivavy manendry Azy io sy ny toeny; fa mpanota io.
40 Ary Jeso namaly ka nanao taminy hoe : Ry Simona, manan-kolazaina aminao Aho. Dia hoy izy : Lazao ary, Mpampianatra ô.
41 Nisy roa lahy nananan’ ny mpampanàna vola anankiray trosa : ny iray nananany denaria diman-jato, ary ny iray kosa dimam-polo.
42 Ary raha tsy nanan-kaloa izy roa lahy, dia samy navelany. Koa iza moa amin’ ireo no ho tia azy indrindra ?
43 Simona namaly ka nanao hoe : Ataoko fa ilay namoizany be. Dia hoy Izy taminy : Marina ny hevitrao.
44 Ary Jeso nitodika nijery an-dravehivavy ka nanao tamin’ i Simona hoe : Hitanao va io vehivavy io ? Niditra teto an-tranonao Aho; nefa tsy mba nanome Ahy rano hanasana ny tongotro hianao; fa izy kosa nahakotsa ny tongotro tamin’ ny ranomasony, dia namaoka azy tamin’ ny volon-dohany.
45 Tsy mba nanoroka Ahy akory hianao; fa izy, hatr’ izay nidirako, dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro.
47 Ary amin’ izany dia lazaiko aminao : Voavela ny helony be, fa be fitiavana izy; fa izay voavela tamin’ ny kely dia kely fitiavana.
48 Dia hoy Izy tamin-dravehivavy : Voavela ny helokao.
49 Ary izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia niresaka hoe : Iza moa Itý no mba mamela heloka ?
50 Ary hoy Izy tamin-dravehivavy : Ny finoanao efa namonjy anao; mandehana soa aman-tsara.
Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara Mamaky ny Baiboly.
TIA AN’I JESOA
Izay liana ny amin’i Jeso dia tsy zary mpianany daholo akory ka hoe tena tia Azy.
Inona re ny antony nanasan’i Simona an’i Jeso tao an-tranony?
Ny eritreriny tsy dia madio (39), sy ny fandraisana mangatsiaka nandraisany ny Tompo (44-47) dia mampiseho fa ny fanasana nataony dia tsy avy amin’olona voavonjy ka te-haneho ny fitiavany an’i Jeso (jereo : Lioka 5.29).
Nahatsiaro ny fahotany itý vehivavy mpanota itý.
Nanatona an’i Jeso tsy niandry fanasana izy, niaraka tamin’izay saro-bidy indrindra nananany : tavoara alabastara feno menaka manitra sy ny fony (Salamo 51.19).
Tsy nahajery an’i Jeso mifanatrika izy, fa nanetry tena teo an-tongony, nanao ny volon-dohany ho toy ny lamba famaohana, ka namaoka ny tongotr’i Jeso tamin’ny ranomasony vokatrin'ny fò torotoro tao anatiny.
Endrey izany fitiavana sy fanetren-tena nasehony!
Fantatrin'ny Tompo izay momba an-dRavehivavy rehetra ary navelany ny fahotany rehetra.
Tahaka ny nahafantaran’ny ny eritreritr’i Simona no nahafantarany ny fiainan’itý vehivavy eo an-tongony itý.
Fa tsy misy fahotana lehibe loatra ka tsy afaka avelan’ny Tompo !
Tsy misy fiainana simba loatra ka tsy hainy amboarina sy arenina !
Ny ilainy dia ny fanatonana Azy amin’ny fò tsotra sy mahatsiaro diso.
Mamela heloka izy (50) ary mamela ilay olona hitia azy (47).
Maro ny olona izay niaina ny famelan-keloka sy ny fahasoavan’Andriamanitra no tonga vavolombelon’ny fitiavany maneran-tany. Ary ianao mba ahoana ?
Ny fitiavana no manaporofo fa nandray famelan-keloka ny olona iray,
ary arakin'ny halehiben’ny famelan-keloka
no halehiben’ny fitiavana ho setrin’izany.
Anio Alahady isika dia hivavaka ho an'ny Ministera Biblika sy ny Mampiely Baiboly ary izay rehetra miasa amin'ny fanapariahana sy fampamakiana ny Baiboly isika.